कोरोनाकैबीच पहिलो पटक ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ प्रदर्शनमा हुँदै, के भन्छन् निर्माता श्रेष्ठ ? (अन्तर्वार्ता) - Candles Khabar
गृहपृष्ठ कोरोनाकैबीच पहिलो पटक ‘एउटा यस्तो प्रेम कहानी’ प्रदर्शनमा हुँदै, के भन्छन् निर्माता श्रेष्ठ ? (अन्तर्वार्ता)
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेसँगै बन्द भएका सिनेमा घरहरु भोली माघ १ गते देखि खुल्दै छन् ।
यो सिनेमाको प्रदर्शनसँगै बन्द भएका, रोकिएर रहेका कामहरु सुचारु गर्न बाटो खोल्छ । अब केहि गर्नुपर्छ चुप लागेर बस्नु हुन्न भन्ने सन्देश प्रवाह गर्छ । साथै सिने क्षेत्रका प्राविधिक कलाकारहरुले काम पाउले वातावरण बन्छ । हामीले प्राविधिक कलाकारहरुलाई काम पनि दिनु छ । मैले पनि सिनेमाको प्रदर्शन पछि संकलन हुने केहि रकम प्राविधिकहरुलाई सहयोग गर्नेछु । यस्तै अहिलेको अवस्था सृजना गर्न नेपाल सरकारले गरेको सहयोगलाई धन्यवाद दिन्छु ।
पछिल्लाे - आज शनिवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ १७ गते
अघिल्लाे - आज सोमवार, कस्ता कार्यका निम्ति शुभ रहनेछ ? हेर्नुहोस् आजको दिन २०७७ माघ १९ गते